I-Simple Machines Word Word, i-Crossword Puzzle kunye nokunye
Iimveliso eziPhezulu eziPhezulu
Imishini elula echazwe
Umatshini isixhobo esisetyenziselwa ukwenza umsebenzi-umlinganiselo wamandla adingekayo ukuhambisa into - kulula. Imishini elula , eye yasetyenziselwa iwaka leeminyaka, ingasebenzisana kunye nokwenza inzuzo enkulu kakhulu, njengebhayisiki. Iimishini ezithandathu ezilula zi-pulleys, iiplani ezithintekayo, i-wedges, i-screws, kunye neevili kunye ne-axles. Sebenzisa ezi mpapasho ukuze uncede abafundi bafunde imigaqo kunye nesayensi emva kwemishini elula.
Uphando lweLizwi - Ummiselo
I-lever iqule ingalo ende eqinile (njengebhodi leplati) kunye nefleck ebudeni bayo, njengoko abafundi baya kufunda kweli gama lokukhangela . I-fulcrum isekela i-lever ebangela ingalo ukuba ihambe. Omnye umzekelo oqhelekileyo wesiphakamiso sinqabileyo.
Isigama - I-Pulley
I-pulley ngumshini olula unceda ukuphakamisa izinto. Iqukethe isondo kwi-axle, njengoko abafundi bangafunda ngokugqiba eli phesheya lomsebenzi . Ivili liphethe i-groove ngentambo. Xa amandla asetyenziswa kwintambo, ihambisa into.
I-Crossword Puzzle - I-Plane Inclin
Inqwelo e-inclined, ngendlela elula kakhulu, i-ramp, abafundi abaya kufuneka bayakwazi ukuzalisa le puzzle puzzle . Inqwelo enokuthi isetyenziselwa ukuhambisa izinto phezulu okanye ezantsi. Islayidi yokudlala yila mzekelo omnandi wesicwangciso esinqumlekileyo. Eminye imizekelo yemihla ngemihla ibandakanya izithuthi (njengesihlalo sabakhubazekile okanye ukulayisha ii-ramps dock), umbhede weloli yokulahla kunye nezitepsi.
Umngeni - Umvuzo
Umtya uncedo lwesinxantathu equkethe iiplani ezimbini ezityebileyo, into ekufuneka abafundi bayifumane ukuyizalisa le phepha. Umtya oqhelekileyo usetyenziselwa ukuhlukanisa izinto ngokulula, kodwa unokubamba izinto ndawonye. Isitshixo kunye nefosholo yimimiselo yamadaka asetyenziswa ukuhlukanisa izinto.
Umsebenzi weAlfabhethi - Isikrini
Isikratshi isithuthi esityebileyo esibhalwe nge-axis okanye kwi-shaft ephakathi, ucezu wolwazi onokuziphonononga nabafundi njengoko bazalisa iphepha le- alfabhethi lomsebenzi . Uninzi lweentlobo zineengqungquthela okanye iintambo ezinjengezo onokuzisebenzisa ukubamba iintsimbi zombini kunye okanye uxhoma umfanekiso eludongeni.
I-Puzzle Page - I-Wheel ne-Axle
Ivili kunye ne-axle basebenzisana ngokuhlanganisa i-disc enkulu (ivili) nge-cylinder encinci (i-axle), eya kuba luncedo kubafundi ukuba bazi ukuba bazalise iphepha lekhazi . Xa amandla asetyenziswa kwivili, i-axle iyajika. Isango lomnyango ngumzekelo wesondo kunye ne-axle.
John Adams Worksheets kunye namaphepha ombala
Iinqununu zokuBhala incwadi
Izizathu ezintle zokufumana izindlu zasekhaya
Ukubhiyozela uSuku lweVeterans Day
Iingxenye zeNtetho eziPrintiweyo
Iimpapasho zeMidlalo zeMagnet zamahhala
Phansi kwemihlathi emihlanu Umxholo!
Yidla Iifuno Zakho Eziprintwayo
60-50 BC - uKesare, uCracus noPompey kunye no-First Triumvirate
ISanishi namhlanje: Iingcebiso zokuFunda nokusebenzisa iSpanish
USir Charles Wheatstone (1802 - 1875)
Ukuqonda i-Purposive Sampling
Uluhlu olupheleleyo lweeNkonzo zikaJohn Steinbeck
I-Hypothesis kwi-Bipedalism kwi-Human evolution
Konke malunga neMonons
Bangaphi abaMongameli base-US baye bafumana umvuzo weNobel woxolo?
Ngaba Unokuba Wedwa Kodwa Unoyolo?
I-Sakuga Animation kwi-Anime
Umbono weNqununu malunga nokujongana nabazali abanzima
1931 I-PGA Championship: Unonalded Winner, kodwa kunjalo kwiiRekhodi
I-Big Bang Theory Batman Cookie Jar
Latin Love Song Uhlu lokudlala
I-consejos para casarse con visa de turista en Estados Unidos
Uluphi umzobo wokuzalwa?
Ukuhlola iHara Line kunye nomsebenzi wayo wokuPhilisa
I-Hartwick College Admissions